I-T4A (P) I-Slip yentlawulo yeeRhafu zeNgeniso zeCanada
I-T4A (P) I-Slip yentela yeeRhafu zeNgeniso zeCanada
Le fomu yenzelwe izibonelelo zempesheni yasePanada
I-Akhawunti yasePanada yaseThanada (P), okanye iNkcazo yeCanada ye-Pension Plan Benefits, ikhishwa yiNkonzo yaseCanada ukukuxelela kunye ne-Canada Agency Revenue Agency ukuba unamkeleke kangakanani kwiCanada yeProgram Pension kunyaka werhafu kunye nenani lentlawulo yengeniso yachithwa. Iiprogram zePenshoni yePensheni yePension zibandakanya umhlalaphantsi, usindiso, umntwana kunye nokufa. Funda ukuze ufunde ulwazi olubalulekileyo malunga neerhafu zeT4A (P) zerhafu, kubandakanywa nomhla wokugqibela wokuzithoba, indlela yokufakela ezi fom kunye nokwenza ntoni ukuba i-T4A (P) yakho ilahlekile.
Umgca wokugqibela kunye nokufaka i-T4A (P)
I-T4A (P) irhafu yeerhafu kufuneka ikhishwe ngomhla wokugqibela kaFebruwari ngonyaka emva konyaka wekhalenda apho i-T4A (P) irhafu ifaka isicelo. Xa ufaka iphepha lokubuyisela irhafu yengeniso, faka ikopi yeSlip ye-T4A (P) yentlawulo yerhafu oyifumeneyo. Ungaphinde ufake ifayile yakho yerhafu ngeniso ngokusebenzisa:
I-NETFILE , inkonzo yokufaka intela yombane evumela ukuba uthumele irhafu yengeniso yakho ngamnye kwaye uzuze ukubuyela ngqo kwi-CRA
I-EFILE , apho ulungiselela ukubuyisela irhafu yengeniso yakho kwaye uyithathe kumboneleli wenkonzo ukuyifakela ngekhompyutheni ngenkokhelo
Kwimeko nayiphi na imeko, gcina iikopi zeT4A (P) zakho zerhafu kwiirekhodi zakho iminyaka emithandathu xa kwenzeka i-CRA ukuba ibabone.
Iingxowa zerhafu ezingekhoyo
Ukuba awufumani isalathisi sakho sentela ye-T4A (P), qha ga mshelana neNkonzo yeCanada ngo-1-800-277-9914 ngexesha leexesha eliqhelekileyo loshishino. Uyakucelwa iNombolo yakho yinshurensi yentlalo .
Nangona ungayifumana i-slip yakho yerhafu ye-T4A (P), faka ireyiti yakho yerhafu yengeniso ngokukhawuleza ukuba ubalekele izigwebo zokufaka irhafu yengeniso yakho emva kwexesha .
Bala izibonelelo zakho zePhaneli zePensheni zeCanada kunye neenqununu kunye nezikweletu onokuzibangela usebenzisa nayiphi na ingcaciso onayo. Faka incwadana ethetha ukuba wenze ntoni ukuze ufumane ikopi yerhafu yokulahleka yentela. Faka iikopi zaliphi na izitatimenti kunye nolwazi owalisebenzisileyo ekubaleni iingeniso zengeniso kunye nokuncitshiswa kwesafaki yentela ekhoyo.
Ulwazi lweSipho soRhafu
Uyabona ukuba i-slip yerhafu ye-T4A (P) ibonakala ngathi kwi-website ye-CRA. Uyakufumana kwakhona ulwazi oluninzi malunga noko kufakwe kwibhokisi nganye kwi-T4A (P) kunye nendlela yokujongana nayo xa ufaka irhafu yengeniso yakho ngenzuzo kwisayithi. Finyelela ulwazi olungaphezulu kwizinto ezidweliswe kwiibhokisi ezithile ze-T4A (P), kuquka:
Iintlawulo zePPP ezihlawulwayo
Irhafu yerhafu echithwe
Inzuzo yakho yomhlalaphantsi
Ikhasi lewebhu libonelela ngolwazi ngomntwana, ukufa, iintlawulo zomhlala-phantsi, kunye nokunye.
Ezinye i-T4 Tax Slips
Olunye ulwazi lwerhafu lweT4 lubandakanya:
I-T4 : Ingxelo yomvuzo ohlawulwe
I-T4A : Ingxelo yomhlalaphantsi, umhlalaphantsi, i-annuity, kunye neminye ingeniso
I-T4A (i-OAS) : Ingxelo yokukhuseleko lokuguga
I-T4E : ingxelo ye- Intshurensi yengqesho kunye nezinye izibonelelo
Ziqhelise ngezi zerhafu zokuqinisekisa ukuba uyifake iirhafu zakho ngokuchanekileyo kodwa ufumene zonke iintlawulo ozibolekayo.
I-10 Iqala ukuba ngabafazi baseCanada kuRhulumente
Abathengi baseKhaya bokuQala abathengi-ntlawulo (HBTC)
Ukuthenga nge-Intanethi kunye nokuthumela kwiChanada
Izicelo zePasipoti zaseCanada
Yintoni i-T4E yeFayili yentlawulo yaseKhanada?
I-Embassy yaseCanada kunye nabaQhagamshelene eMelika
Iiprojethi ezili-10 ze-Web Conservative Education and Advocacy Sites
Iimpawu zoBomi ngoRudyard Kipling
Iimnandi malunga neChina yamandulo kunye neefoto
Ngaphambi kokuba Uthenge i-ATV esetyenzisiweyo, Khangela okokujonga
Amanqaku angcolileyo kagesi e-Eel
Iimpawu ezivela kuLoan Tolstoy's Classic 'uAnna Karenina'
I-VIN Decoder yamahhala
Ukuvelisa Umlilo kwiBhotile
Indlela yokwenza i-Polish Remover ye-Nail Homemade
Uthini Umehluko Phakathi koFreedomman / Freedwoman kunye no-Free Born?
8 Iindawo Ezinkulu Zokuthenga Iigqabi Online
Claremont McKenna GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Baha'i Faith Symbol Gallery